Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Oo Maanta Muqdisho Soogaaray(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Hogaamiyaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa soo gaaray Magaalada Muqdisho oo uu kaga qaybagalaayo Shirka Madasha Wadatashiga Somaliya.
Axmed Madoobe oo ka soo ambabaxay Magaalada Kismaayo, ayaa waxaa Garoonka Muqdisho ku soo dhaweeyay Madax ka tirsan Dowladda Federalka Somaliya iyo Xildhibaano.
Hogaamiyaha Maamulka Jubbaland, ayaa loo galbiyay Madaxtooyada Somaliya ee Magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu iminka ku sugan yahay.
Shirka Madasha Wadatashiga Siyaasada Somaliya, ayaa lagu wadaa inuu ka furmo Magaalada Muqdisho, waxaana ka qaybgalaya shirkaan dhamaan madaxda Maamul Goboleedyada dalka iyo qaybaha Bulshada,.
Dowladda Somaliya, ayaa shirkaan ku dhawaaqday inuu ka furmayo Magaalada Muqdisho, waxaana looga tashan doona shirka nooca ay noqon doonto Doorashada dalka ka dhaceysa.
Jawiga Magaalada Muqdisho, ayaa laga dareemayaa diyaargaroow Ballaaran oo loogu jiro martigelinta shirkaan.